युगसम्बाद साप्ताहिक - विश्वव्यापी बजार भएको रत्न प्रशोधन कहिले ?
Sunday, 12.15.2019, 08:18am (GMT+5.5) Home Contact
विश्वव्यापी बजार भएको रत्न प्रशोधन कहिले ?
काठमाडौं । प्रकृतिले नेपाललाई सबथोक दिएको छ । पेट्रोलियमदेखि ग्यास अनि खनिजका साथै विश्वमा अत्यधिक मूल्य रहेको युरेनियम र गहनाका रुपमा प्रयोग हुने रत्न (पत्थर) प्रशस्तै छ । पूर्वी पहाडदेखि पश्चिमका पहाडी जिल्लामा यी रत्नहरुको खानी रहेको छ । यसको केही सीमित व्यापारीहरुले उत्खनन् गरेर कमाइरहेका छन् । सरकारलाई कुनै राजश्व छैन अनि बहुमूल्य पत्थरका खानीको छेउमा बस्ने जनता गरीबीको चरम सीममा छन् ।
युरेनियम खेर गैरहेको छ । नेपालको युरेनियममा भारत र अमेरिकाले एक किसिमले आँखा गाडिरहेको लुकाउनुपर्ने विषय हैन । नेपालको मुस्ताङमा प्रशस्न युरेनियम रहेको खुलासा अहिले हैन दशकांै अघि भएको हो । त्यस्तै तिब्बतमा पनि प्रशस्त युरेनियम छ । अमेरिका र भारतले नेपालमाथि आँखा गाडेर चीन बिरोधी (फ्रि तिब्बत) गतिविधि उक्साइरहनुको मूल कारण तिब्बतको युरेनियम नै हो ।
युरेनियम जस्तै मुलुकको आर्थिक विकास छोटै समयमा हुने स्रोत हो रत्न । विश्वकै उच्चकोटीको रत्न पाइन्छ नेपालमा त्यो पनि गरीबीले पिल्सिएका मध्यपश्चिमको जाजरकोट जिल्लामा यस्ता पत्थरको पहाड छ । तर यसको सदुपयोग छैन र केही व्यापारीहरुले उत्खनन अनुमति लिएर करोडपति बनिरहेका छन् । सरकारी तहबाट उत्खनन नहुँदा बहुमूल्य पत्थरको अवैधरुपमा चोरी निकासी तीव्ररुपले भैरहेको छ ।
रुवी, सफायर, टुर्मालिन, ज्यास्पर, कोरोण्डम, टोपाज, इमेराल्ड, क्वार्ज, गार्नेट, ओपल, ज्याडेट, मूनस्टोन, काइनाइड, एक्युमरिन जस्ता बहुमूल्य पत्थरको नेपालमा ठूलो भण्डार छ ।
जाजरकोट जिल्लाको जुनीचाँदे गाउँपालिकाको टालेगाउँ, अछार्नी, पजारु, दहलगायतका आधा दर्जन ठाउँमा पत्थर खानी रहेका छन् । खानी सञ्चालनमा सम्बन्धित निकायले वास्ता नगर्दा वर्षेनी करोडौँ मूल्यको पत्थर चोरी निकासी हुने गरेको हो । अर्छानी, टालेगाउँ, पजारु, पैंक, दह, कोर्ताङ्ग, गर्खाकोट लगायत गाउँबाट विभिन्न स्थानमा पाइने उक्त बहुमूल्य पत्थरको स्थानीय बजारमा उक्त पत्थर किलोको रु एक हजारदेखि ३० हजारसम्म बिक्री हुने गरेको छ । खानी आसपासमा रु १५० देखि रु एक हजार ५०० सम्ममा बिक्री हुने गरेको छ । साविकका टालेगाउँ, अर्छानी, दह र कोर्ताङ्ग गाविसबाट मात्र वार्षिक १० टन टुर्मालिन तथा काइनाइट चोरी निकासी हुने गरेको यसअघ अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।
नेपालमा पाइने यी बहुमूल्य पत्थरको कारोबार कत्रो छ भन्ने सरकारलाई जानकारी छैन । सरकारी तहबाट यसको अनुमति नभए पनि विदेशमा नेपालको भनेर कारोबार भइरहेको रुवीको विक्री भैरहेको छ । जाजरकोटको टालेगाउँमा पाइने पत्थर काइनाइट विश्वकै उच्च गुणस्तरमा परेको छ । विभिन्न स्थानमा पाइने नवरत्न पत्थरमध्ये टालेगाउँमा पाइने काइनाइट विश्वकै उच्च गुणस्तरमा पर्ने यसअघि नै पत्ता लागेको हो । एक हजार रत्न पत्थरमध्ये टुमार्लिन, काइनाइट, रुबी, हेम्वरगाइड, डेम्वराइट, गार्नेट, क्रिष्ट्रनलगायतका आठ प्रकारका रत्न पत्थर नेपालमा पाइन्छ । त्यस्तै धादिङमा पाइने रुबी पनि विश्वकै उच्च कोटीको पत्थर हुन् । ताप्लेजुङमा हेम्वरगाइड पाइन्छ भने सङ्खुवासभामा डेम्वराइट र गार्नेट पाइने गरेको छ ।
धादिङ र रसुवामा रुवी, जाजरकोट र अछाममा काइनाइट, टुर्मा्लिन, एक्युमरिन तथा संखुवासभा, धादिङमा क्वार्जका खानी विभागको अनुमति विना संचालन भइरहेको कारोबारमा लागेकाहरू बताउँछन् । केही ग्रामको लाखौं रुपैयाँ पर्ने सफायर जस्ता बहुमूल्य पत्थर यसरी मिल्किँदा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपनालाई नै गिज्याउँछ ।
भारत, चीन, यूरोपदेखि अमेरिकासम्म नेपाली रत्नपत्थरहरूको ठूलो कारोबार छ । तर यो कारोबारबाट राज्यलाई कुनै लाभ छैन । यी महँगा पत्थरको उत्खनन र कारोबारको अनुमति दिने, अनुगमन गर्ने र नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएको खानी तथा भूगर्भ विभाग कमजोर र अक्षम हुँदा गैरकानूनी रूपमा यसको कारोबार भइरहेको छ ।
अब भने सरकार यसमा तातेको देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जाजरकोटको पत्थर खानी उत्खननको तयारीमा सरकार रहेको जानकारी दिनुभएको छ । यदि यसो हुनसके यो इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो काम हुनेछ ।